I-Nodulosis, isifo sokungunda kwintlanzi | Ngeentlanzi
Ukuxhokonxa cysts kulusu lwentlanzi kwaye ngaphakathi yinto esiyaziyo njenge nodulosis, isifo Iveliswe zizidleleli ezinesidumbu kunye nomngundo wobungakanani bemizuzu engabonakaliyo.
La i-nodulosis inobukhulu obahlukeneyo. Ukongeza, kukho umngcipheko wokusasazeka kwezinye iintlanzi ezikwi-aquarium. Ukuhanjiswa kwayo kungenxa yokungenisa kwayo kuba banokongezwa kwii-crustaceans eziyinxalenye yokutya kwabo. Ukusukela olu hlobo lwecyst, ngaphakathi, lwenziwe ngamawaka ezinto ezincinci ezondla kuloo ndawo ihlaseleyo.
Ama-cysts amancinci angaphakathi okanye angaphandle
Singathetha ngentlanzi ene-nodulosis xa siphawula amaqhakuva amancinci okanye amaqhuma. Zihlala ziluhlaza okweqanda ngombala kwaye zihlala zikwisiphelo, iigill kunye nolusu lwentlanzi. Nangona kukho namaxesha okuba zinokufakwa ngaphakathi emzimbeni. Ukuba siqaphela ukuba intlanzi idumbile, Ngaphantsi kancinci kwesentimitha, kukuba unokubandezeleka ngenxa ye-nodulosis. Ngexesha elithile lesi sifo banokufumana ukubola kwamaphiko kunye nokubonakala kwezilonda kulusu kunye nokubumba.
Ayikho inzululwazi ethile ukuba iipasasites zidluliselwa njani. Kodwa ukuba kuyangqinwa oko ezi ntsholongwane zinokuphila ixesha elithile ngaphandle kobukho bomphathi wakho. Ayichaphazeli bonke abemi be-aquarium. Endaweni yokuba kuqheleke kwiqela lohlobo ngalunye.
Ngokwenene ukuba i-nodulosis ingaphakathi kwaye ke kunzima ukubhaqwa, kunokwenzeka ukuba isifo asinakufunyanwa kwintlanzi, ngaphandle kokuba imeko iye ngaphandle. Nangona kunjalo, akukho lonyango lusebenzayo ukunyanga esi sifo.
Kuyacetyiswa kuqala iintsholongwane emanzini nokwahlula iintlanzi ezigulayo kweziphilileyo ukuze zingosuleli. Iyeza abanika lona lelo licetyiswa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo sakuba sifunyenwe isifo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » I-Nodulosis, isifo sokungunda kwintlanzi
Izilwanyana zasemanzini ezinetyhefu